Gini ka imara banyere usoro nile nke PVC plastik nke na-eme? - News-Topflor China amachi
Gịnị kpatara ya
Vinyl dị iche iche
Okpokoro Vinyl Taịl
Egwuregwu na-etinye ọnụ
Kpara vinyl n'ala
Gbado ọkụ mkpanaka
3D Akwụkwọ mmado
Kedu ihe ị maara banyere usoro dum nke PVC plastic floor waking?
Echiche:54 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2019-06-03 Mmalite: Saịtị
Nsogbu nke ejiji, nsị, arụmọrụ elu nke UV, na nhicha na-ezighi ezi na eserese nke ala plastik mgbe ejiri ya mee ogologo oge emetụtala ọdịdị nke ala ma ọ bụghị dị mma maka iji ala plastik nkịtị. Iji kwado mma na ịrụ ọrụ nke ọma nke ala plastik, ndozi ọkachamara na ịrụzi ala plastik dị ezigbo mkpa. Mgbe a na-arụzi ụlọ nrụzi plastik, ịmebe plastik dị mkpa. Mgbe ahụ, usoro dum nke PVC plastic n'ala waks, ị maara ole?
Tupu ịme akwa PVC plastik, ọ bụ ọrụ nhicha na ịgwọ ala plastik. Ọ ka mma ịhọrọ nlekọta ala plastik mgbe ihu igwe dị mma. Zere iwu na mmiri ozuzo na oke iru mmiri na okpomọkụ dị ala. Ọ bụrụ na iru mmiri dị elu nke ukwuu, ọ nwere ike ibute nsogbu na-acha ọcha, na wax wax dị n'okpuru 5 Celsius dị mfe, nke na-adịghị mma maka iwu.
Mgbe ịsachara ala ala plastik nke a chọrọ ịme, jide n'aka na ọ dịghị ájá ma ọ bụ ájá ọzọ tupu ịmee iji gbochie ịmecha ahụ. Mgbe ihichachara, ịkwesịrị ichere ka mmiri dị na plastik kpoo kpamkpam tupu ịme waksị.
Mgbe ị gwakọchara wax na plastik, ọ ga-agbanye ala wax na ala dị ọcha ma ọ bụ ogbo. Can nwere ike iduzi ikpe obodo na ebe anaghị egbochi ma kwenye na enweghị ntụpọ tupu ị mee ihe niile. Mgbe ahụ jiri akwa dị ọcha ma ọ bụ ájá pụrụ iche na-eme ka mmiri kpuchie plastik, ma jiri nlezianya tinye ya n'otu uzo ahụ. Ọsọ ekwesịghị ịdị oke ọsọ, echefula mkpuchi ma ọ bụ ọkpụrụkpụ adịghị mkpa, iji kwado ọkpụrụkpụ edo.
Mgbe itinye wax ugboro abụọ (nke ọ bụla nke wax ga-echere oyi akwa nke wax ka ọ kpọọ nkụ tupu akwa ọzọ nke waks), mgbe ị kpọnwụchara kpamkpam, mee ka ájá dị mma ma ọ bụ akwa dị nro. Kwe ka elu kpoo ma ọ dịkarịa ala awa 24 mgbe emechara ya, ma ghara ịbanye na ya. Mgbe usoro nlekọta na ịme waksị, ala plastik nwere ike weghachite gloss mbụ nke ala plastik ma gbatịa ndụ ọrụ ya, na-eweta mmetụta pụrụ iche na ịtụnanya.
Ntughari ohuru na ahia ahia PVC PVC 2019-2025
Etu esi amata ọdịiche nke ala egwuregwu PVC
Topflor bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ahịa nke na-enye ndị ahịa ihe karịrị mba 50 ọrụ. Anyị na-enye ọtụtụ ụdị azụmaahịa azụmaahịa iji zute ọtụtụ ahịa: Egwuregwu, Ahụike, Ahụike, Mmụta, Rlọ ahịa, Offlọ Ọrụ, Rlọ ahịa na Transportgbọ njem. Topflor etinyela aka n'ichepụta ngwaahịa na ọrụ agbakwunyere maka ndị ahịa.
Copyright © 2020 Topflor. Ikike niile echekwabara. Nka na ụzụ site MEEALL